Qaarada Africa oo ay ku noolyihiin 1.2 Bilyan sidee u saameeyay Coronavirus?. - Awdinle Online
Qaarada Africa oo ay ku noolyihiin 1.2 Bilyan sidee u saameeyay Coronavirus?.
In ka badan laba bilood ka dib markii Masar ay noqotay waddankii ugu horreeyay ee Afrika ee xaqiijiya kiis la xariira xanuunka loo yaqaan “coronavirus”, faafitaanku wuxuu gaaray waddan kasta oo dhaca qaaradda oo ay ku nool 1.2 bilyan oo qof.
Laga bilaabo maanta oo ay tahay 19 May 2020, tirada la xaqiijiyay ee dhimashada coronavirus ee qaaradda ayaa ah 2,834, iyada oo dhimashadu ay ka mid yihiin Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Jacques Joachim Yhombi-Opango iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen.
Waxaa la xaqiijiyay 88,172 in ay qaadeen Xanuunka gudaha qaarada iyo 33,863 ka soo kabasho ah, sida laga soo xigtay Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Afrika
Khubaradu waxa ay ka digayaan nidaamyada daryeelka caafimaad ee jilicsan ee dalal badan oo Afrikaan ah in qater badan galinayaan Malaayiin ruux oo ku nool qaarada Afrika, si gaara qalabka dadka neefta siiyo oo ku yar guud ahaan qaadara oo horay ula daala dhacaysay Gaajo, shaqo la’aan, Colaad gobolada qaarkood, qaxooto , Nafaqadaro iyo cuduro kale.
Covid-19: Maxaa ka socda dunida inteeda kale?.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu si joogto ah u joojinayo maaliyaddii uu siin jiray Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) isla markaana uu iskaga tagi doono guud ahaan hay’adda Qaramada Midoobay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Ha’yadda Caafimaadka Adduunka in ay tahay ‘eey uu wad wato Shiinaha’, hadalka Trump ayaa imaanaya xilli WHO uu u socdo kulan labo maalmood qaadanaya oo ay uga hadlayaan safmarka feyraska Korona.
Madaxa WHO ayaa ballan qaaday dib-u-eegis madax-bannaan oo ku saabsan wax ka qabashada masiibada adduunka, ka dib markii Dowlado iskugu yimid shir aan caadi ahayn ay Golaha Caafimaadka Adduunka ugu baaqeen in baaris la sameeyo madax banaan oo ku aadan Faafitaanka Xanuunka.
Mareykanka ayaa $ 11 bilyan u qoondeeyay in uu ku bixiyo baaritaanka coronavirus-ka iyadoo waddanku dib u furmayo si loo soo kabo dhaqaalaha hoos u sii dhacaya.
Cabashooyinka shaqo la’aanta ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa gaartay 69 boqolkiiba bishii la soo dhaafay iyadoo masiibadaas ay si daran ugu dhufatay suuqyada dalkaasi.
Guud ahaan Caalamka, waxaa cudurku haleelay 4.8 milyan, in kabadan 318,500 oo qof waa ay u dhinteen xanuunka, sida laga soo xigtay jaamacada Johns Hopkins. Ku dhawaad ​​1.8 milyan oo qof ayaa ka soo kabsaday.
Previous articleDagaal u dhaxeeya ciidamo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo ka qarxay Mudug
Next articleBeledweyne: Ganacsigii oo xirmay